Animation – Family Of Films
The Son of Bigfoot (2017) မြန်​မာစာတန်းထိုး
The Son of Bigfoot (2017) မြန်​မာစာတန်းထိုး IMDb Ratings:6.2/10 Genre: Animation, Comedy, Family Run Time:1h 32min Released Date:16 August 2017 (France) ဇာတ်​လမ်းအကျဉ်း Initial release: July, 26, 27 (Netherlands) Directors: Ben Stassen, Jeremy Degruson Budget: 30 million USD (estimated) Music composed by: Puggy Screenplay: Cal Brunker, Bob Barlen ခြောက်လသားအရွယ်ကအဖေမရှိတော့တဲ့ခလေးငယ်တစ်ယောက်ဟာ အဖေ့ရဲ့မေတ္တာဆိုတာဘာမှန်းမသိ၊ အတန်းထဲမှာသူငယ်ချင်းတွေရဲ့လှောင်ပြောင်ခြင်းကိုခံရပြီးအားငယ်နေမိတဲ့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်း၊ အဖေကလူသားနှင့်မတူဘဲ သတ္တဝါတစ်ကောင်လိုဖြစ်နေစဉ် သူ့ကိုယ်သူ လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်စမ်းသပ်ပြီးပြင်ဆင်နေချိန် ဆံပင်တုလုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကတွေ့သွားတဲ့အခါ သားကိုလည်းမစွန့်ရဲ၊ ဇနီးကိုလည်းမစွန့်ရဲဘဲမိသားစုကိုကာကွယ်ပေးခဲ့သော ဖခင်ရဲ့မေတ္တာကို ဖော်ကျူးထားပါသည်။ အသက်ဆယ့်သုံးနှစ်ရောက်မှသူ့အဖေအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြားရတော့ အံ့သြမတတ်ဖြစ်သွားပြီး သူ့အဖေကိုရှာဖို့ သစ်တောထဲကိုတစ်ယောက်တည်းထွက်သွားတဲ့အခါ အဖေကိုချက်ချင်းမတွေ့ဘဲ အန္တရာယ်ကြုံရပုံ၊ လောကီလူသားတို့၏ အတ္တ၊ ...
One Piece “3D2Y”(2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
One Piece "3D2Y"(2014) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 8.1/10 Genre: Animation, Action, Adventure Run Time: 1 hour 48 mins ဒီ Animation က လူတိုင်းသိပြီးသားမို့ review မရေးတော့ဘူးဗျာ ခံစားကြည့်လိုက်ပါ animationချစ်သူတွေရေ.... Reviewed By Win Kyaw Thu Fixed by ဟိန်းထက် Encoded by Win Kyaw Thu 720p HD 525.99 MB (openload)
Assassination Classroom TV Series (2015–2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Assassination Classroom TV Series (2015–2016) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 8.0 Animation ချစ်သူများအတွက် စီးရီးလေးတစ်ခု ချစ်ခြင်းအားဖြင် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ Assassination Classroom TV Series (2015–2016) သည် IMDb 8.0 episodes 47 ခု ပါရှိပြီး အသံသရုပ်ဆောင် Jun Fukuyama, Mai Fuchigami, Lindsay Seidel တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော | Animation, Action, Comedy ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. စွမ်းအားရှင်သတ္တဝါတစ်ကောင်ဟာ တစ်နှစ်အတွင်း ကမ္ဘာကြီးကို သူဖျက်ဆီးမယ်လို့ ကြေငြာလိုက်တယ် ဒါပေမယ့် သူဟာ အခွင့်အရေးတစ်ခုပေးထားပါတယ် သူကို ဘယ်လိုသတ်ရမယ်ဆိုတာကို သူ့ရဲံကျောင်းသားတွေကို ဆရာတစ်ယောက်အဖြစ် သင်ပေးထားပါတယ် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုဟာ အဲ့ဒီမှာ စတင်တော့တာပါပဲ ဇာတ်လမ်းအပြည့်အစုံကို ဆက်လက်ခံစားကြည့်ကြပါဦး Animation ချစ်သူအပေါင်းတို့… Reviewedယ Fixed & ...
Blue Spring Ride သို့မဟုတ် Ao Haru Ride TV Series (2014– ) မြန်မာစာတန်းထိုး
Blue Spring Ride သို့မဟုတ် Ao Haru Ride TV Series (2014– ) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 7.2/10 Blue Spring Ride သို့မဟုတ် Ao Haru Ride TV Series (2014– ) သည် IMDb 7.2 episodes 12 ခု ပါရှိပြီး အသံသရုပ်ဆောင် Tsubasa Honda, Ai Kayano, Masahiro Higashide တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Animation, Comedy, Drama ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. Futaba ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက် Ko Tanaka ဆိုတဲ့ ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင်ကောင်လေးနဲ့ အလယ်တန်းကျောင်းသားဘဝမှာ ချစ်ကြိုက်မိကြလေသည် သို့သော် ကောင်လေးက အထက်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းသို့ ပြောင်းသွားလေရာ သူတို့အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခန်းရပ်သွားလေသည် ...
Big Hero6(2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
Big Hero6(2014) မြန်မာစာတန်းထိုး mdb Ratings: 7.8/10 Google User 89 % Genre: Animation, Action, Adventure Run Time: 1 hour 42 mins Big Hero6(2014) သည် IMDb 7.8 Rotten Tomatoes 89% Google User 93% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Don Hall, Chris Williams ရိုက်ကူးထား၍ Jordan Roberts, Robert L. Baird တို့ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားထားကာ သရုပ်ဆောင် Ryan Potter, Scott Adsit, Jamie Chung တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Animation, Action, Adventure ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားမို့ ချစ်ခြင်းအားဖြင့်တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. The special bond that develops between plus-sized inflatable ငွေရောင် စက်ရုပ်ကလေး Baymax, နှင့် ထူးခြားတဲ့ Hiro Hamada ...
Masha and the Bear TV Series (2009– ) မြန်မာစာတန်းထိုး
Masha and the Bear TV Series (2009– ) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings: 7.9/10 Google User : 69 % Genre: Animation, Action, Adventure Run Time:7mins ကျွန်တော် ဘာသာစပြန်တော့ လက်သွေးခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတွေပါ ကျွန်တော့်ဆီမှာ ကွန်ပျူတာသင် အင်္ဂလိပ်စာလာသင်နေတဲ့ တပည့်တစ်ယောက်ကို သင်ပေးပြီး လက်စွမ်းပြခိုင်းထားတာလေး ခံစားကြည့်စေချင်လို့ သင်လိုက်ပါတယ်…ဘာသာပြန်တာကို အခုမှ စချင်သူများ ဆက်သွယ် လက်စွမ်းပြချင်သူများကို ကိုယ်တတ်သလောက် မှတ်သလောက် သင်ပေးဖို့ အသင့်ပါခင်ဗျာ.. တကယ့် စိတ်ဝင်စားသူများ လာရောက် ဆက်သွယ်နိုင်ပါကြောင်း…. Masha and the Bear TV Series (2009– ) သည် IMDb 7.9 Google User 69% ဖန်တီးသူ Oleg Kuzovkov ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားရိုက်ကူးထား၍ ...
Tangled (2010) မြန်မာစာတန်းထိုး
Tangled (2010) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings: 7.8/10 Rotten Tomatoes 89% Google User : 91% Genre: Animation, Adventure, Comedy Run Time: 1 hour 40 mins အကြိမ်ကြိမ်ကြည့် အကြိမ်ကြိမ်သဘောကျ မရိုးနိုင်တဲ့ကားလေး အားလုံးပဲ ပြန်ကြည့်ချင်မယ်ထင်လို့ တင်လိုက်တာပါ…. Tangled (2010) သည် IMDb 7.8 Rotten Tomatoes 89% Google User 91% ဒါရိုက်တာ Nathan Greno, Byron Howard တို့က ရိုက်ကူးထား၍ Steve Koren, Mark O' Dan Fogelman , Jacob Grimm တို့က ရှေးဟောင်းပုံပြင် "Rapunzel" ကို ပြန်လည် ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားထားကာ အသံ သရုပ်ဆောင် Mandy Moore, Zachary ...
Into the Woods (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
Into the Woods (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings: 6.0/10 Rotten Tomatoes 71% Google User :81% Genre: Adventure, Comedy, Drama Run Time:2hours5mins Into the Woods (2014) သည် IMDb 6.0 Rotten Tomatoes 71% Google User 81% ဒါရိုက်တာ Rob Marshall က ရိုက်ကူးထား၍ James Lapine, Stephen Sondheim တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားထားကာ သရုပ်ဆောင် Anna Kendrick, Meryl Streep, Chris Pine တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Adventure, Comedy, Drama ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. စုန်းမတစ်ယောက်သည် သားသမီးမရှိတဲ့ စားတော်ကဲနှင့် ...
Your Name (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Your Name (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings: 8.5/10 Rotten Tomatoes : 97% Google User :96% Genre: Animation, Drama, Fantasy Run Time:2hour 55 mins Your Name (2016) သည် IMDb 8.5 Rotten Tomatoes 97% Google User 96 % ရထားသော ဒါရိုက်တာ Makoto Shinkai က ရိုက်ကူးထား၍ Makoto Shinkai ရဲ့ ၀တ္ထုကို Makoto Shinkai က ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ အသံသရုပ်ဆောင် Ryûnosuke Kamiki, Mone Kamishiraishi, Ryô Narita တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Animation, Drama, Fantasy ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. သူစိမ်းနှစ်ယောက်ဟာ မထင်မှတ်ဘဲ ဆက်သွယ်မိပြီး တကယ်အဆက်အသွယ်ရသောအခါ သူတို့နှစ်ယောက်ကို ပိုဝေးကွာစေတော့မှာလားဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းမှာ ခံစားကြည့်ရှုပေးကြပါလို့… Reviewed ...
Ribbit (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
Ribbit (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings : 4.1/10 Genre: Animation, Adventure, Comedy Run Time : 1 hour 28 minutes Ribbit (2014) သည် IMDb 4.1 ရထားသော ဒါရိုက်တာ Chuck Powers က ရိုက်ကူးထား၍ Amir Hafizi, Chuck Powers ကိုယ်တိုင် ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးထားကာ အသံသရုပ်ဆောင် Sean Astin, Tim Curry, Russell Peters တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော | Animation, Adventure, Comedy ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. အခက်အခဲများကြားက ဖားလေးတစ်ကောင်ရဲ့ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားပုံကို ဇာတ်လမ်းမှာ ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါလို့…. Reviewed By Win Kyaw Thu Translated By Lin Lin Encoded by - Win ...
Sing (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Sing (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings : 7.1/10 Rotten Tomatoes : 73% Google User : 90% Genre: Animation, Comedy, Family Run Time : 1 hour 48 minutes Sing (2016) သည် IMDb 7.1 Rotten Tomatoes 73% Google User 90 % ရထားသော ဒါရိုက်တာ Garth Jennings, Christophe Lourdelet တို့က ရိုက်ကူးထား၍ : Garth Jennings ကိုယ်တိုင် ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးထားကာ အသံသရုပ်ဆောင် Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Seth MacFarlane တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Animation, Comedy, Family ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. လူသားပုံစံ ...
Frozen (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Frozen (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings : 7.5/10 Rotten Tomatoes : 89% Genre:Animation, Adventure, Comedy Run Time : 1 hour 42 minutes Animaition ကားထဲမှာ ကျွန်တော့်အကြိုက်ဆုံးကား ၂ ကား ( Tangled (2010) နဲ့ Frozen (2013)) ထဲက အားလုံးလည်း ကြိုက်ခဲ့ကြတဲ့ကားလေးကို ပြန်ကြည့်ချင်သူတွေ ကြည့်ရအောင် မကြည့်ရသူတွေလည်း ကြည့်ရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်… Frozen (2013) သည် IMDb 7.5 Rotten Tomatoes 89% Google User 77% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Chris Buck, Jennifer Lee တို့က ရိုက်ကူးထား၍ Jennifer Lee , Hans Christian Andersen တို့က ...
Animal Farm (1954) မြန်မာစာတန်းထိုး
Animal Farm (1954) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings : 7.2/10 Rotten Tomatoes : 63% Genre:Animation, Drama Run Time : 1 hour 12 minutes War for the Planet of the Apes (2017) သည် IMDb 7.7 Rotten Tomatoes 93% Goo Animal Farm (1954) သည် IMDb 7.2 Rotten Tomatoes 63% Google User 91% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Joy Batchelor, John Halas တို့က ရိုက်ကူးထား၍ George Orwell , Lothar Wolff တို့က ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ အသံသရုပ်ဆောင် Gordon ...
Kung Fu Panda3မြန်မာစာတန်းထိုး
Kung Fu Panda3မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings : 7.1/10 Rotten Tomatoes : 87% Genre: Animation, Action, Adventure Run Time : 1 hour 35 minutes Kung Fu Penda 3(2016) သည် IMDb 7.1 Rotten Tomaotes 87% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Alessandro Carloni, Jennifer Yuh Nelson ရိုက်ကူးထားပြီး Jonathan Aibel နဲ့ Glenn Berger တို့ ဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ အသံသရုပ်ဆောင် Jack Black, Bryan Cranston, Dustin Hoffmanတို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Animation, Action, Adventure ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားမို့ ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ….. အံ့ဖွယ်စွန့်စားခန်းတွေရဲ့ ဒဏ္ဍာရီကို ရှေ့ဆက်ဖို့ Po ဟာ တကယ့်မော်ကွန်းဝင်စရာနှစ်ခု ရင်ဆိုင်ရတယ် ဒါပေမယ့် မတူညီမှုတဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုနှစ်ခုပါ…တစ်ခုက သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပြီး ...
Storks (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Storks (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings : 6.8/10 Rotten Tomatoes : 64% Genre: Animation,Adventure, Comedy Run Time : 1 hour 27 mins Storks (2016) ဇာတ်ကားလေးသည် IMDb 6.8 Rotten Tomatoes 64% ရထားပြီး ဒါရိုက်တာ Nicholas Stoller, Doug Sweetland တို့ရိုက်ကူး၍ Nicholas Stoller ရေးသားထားသော အသံသရုပ်ဆောင် Andy Samberg, Katie Crown, Kelsey Grammer တို့ သရုပ်ဆောင်ထားသော Animation,Adventure, Comedy ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားမို့ ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. Storks သည် ကလေးများကနေ အထုပ်အပိုးများအထိ ပို့ဆောင်နေရာ ကလေးတစ်ယောက်အတွက် အမှာစာတစ်ခု ပေါ်လာသောအခါ အကောင်းဆုံး ပို့ဆောင်ရေး stork သည် ကလေးပို့ဆောင်ရေးအမှားတစ်ခုကို ...
How to Train Your Dragon2(2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
How to Train Your Dragon2(2014) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings : 7.8/10 Rotten Tomatoes : 92% Genre: Animation, Action, Adventure Run Time : 1 hour 42 mins How to Train Your Dragon2(2014) ဇာတ်ကားလေးသည် IMDb 7.8 Rotten Tomatoes 92% ရထားပြီး ဒါရိုက်တာ Dean DeBlois ရိုက်ကူး၍ Dean DeBlois, Cressida Cowell တို့ရေးသားထားသော အသံသရုပ်ဆောင် Jay Baruchel, Cate Blanchett, Gerard Butler တို့ သရုပ်ဆောင်ထားသော Animation, Action, Adventure ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားမို့ ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. Hiccup ...
Despicable Me2(2013) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 7.4 Rotten Tomatoes 85% Animation, Adventure, Comedy 1h 38 min ပရိသတ်တွေရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့် နံပါတ် ၂ ကို ဆက်တင်ပေးလိုက်တာပါခင်ဗျာ…. Despicable Me2(2013) သည် IMdb 7.4 Rotten Tomatoes 85% ရထားသော Animation, Adventure, Comedy ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားမို့ ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. ကမ္ဘာ့အဆိုးဆုံးလူဆိုး Gru သည် သေစေလောက်တဲ့ကြွက်သားကို ရပ်တန့်ရန် နှင့် Gru ရဲ့ကိုယ်ပိုင် အိမ်ရှင်တစ်ယောက်အဖြစ် တရားဝင်အဖွဲ့တစ်ခုအားဖြင့်စုဆောင်းခံရသောအခါ ဆူပါအဖေတစ်ယောက်အဖြစ်ကို ပြောင်းလဲခဲ့သည် ကိရိယာအသစ် ကားတွေ မီနီယံအဖွဲ့နဲ့အတူ ဘယ်လို ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ကြမယ်ဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြပါလို့…. Reviewed by- Win Kyaw Thu Translated by Arnold.ats Encoded by Win Kyaw ...
Despicable Me (2010) မြန်မာစာတန်းထိုး
Despicable Me (2010) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDB 7.7 Rotten Tomatoes 82 % Animation, Adventure, Comedy | 1 h 35 min| တောင်းဆိုချက်အရ တင်ပေးလိုက်ပြီဗျာ..... Despicable Me (2010) သည် IMDb 7.7 Rotten Tomatoes 82% ရထားသော Animation, Adventure, Comedy ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားမို့ ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. ရာဇဝင်လူဆိုးကြီးတစ်ကောင်က ကြီးကျယ်သောစုဆောင်းမှုတစ်ခုတွက် အပေါင်အနေဖြင့် မိဘမဲ့မိန်းကလေးသုံးယောက်အား အသုံးပြုခဲ့လေသည် သူသည် သူတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို တွေ့ရှိသွားလေသောအခါ သူ၏စိတ်ကို နက်ရှိုင်းစွာပြောင်းလဲသွားလေတော့သည်….မည်ကဲ့သို့ခံစားရမည်ကိုတော့ ဇာတ်လမ်းမှာ ကြည့်ရှုကြည့်ကြပါလို့….. Review by Win Kyaw Thu Translated by Arnold.ats Encoded by Win Kyaw Thu Despicable Me (2010)
Minions (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
Minions (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDB 6.4 Rotten Tomatoes 56 % Animation, Action, Adventure | 1 h 31 min| Minions (2015) ဇာတ်ကားလေးသည် IMDb 6.4 Rotten Tomatoes 56 % ရထားသော Animation, Action, Adventure ဇာတ်ကားလေတစ်ကားမို့ ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ… မီနီယမ်များဖြစ်သော စတူး ကီဗင်နဲ့ဘော့တို့ ကို စကားလက် အိုဗာကင်းလ်က ပြန်လည်လက်စားချေရန်ကြိုးစားခဲ့သည် ဆူပါဗီလိန် စကားလက် အိုဗာကင်းလ်နှင့်အတူ သူရဲ့ယောကျာ်း တီထွင်သူ ဟာ့ဘ်တို့ ကမ္ဘာကို စိုးမိုးချယ်လှယ်ရန်ကြိုးစားမှုကို မီနီယမ်တွေက ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ ဇာတ်ကားမှာ ကြည့်ရှုပေးကြပါလို့…. Review by Win Kyaw Thu Translated by Arnold.ats Encoded by Win Kyaw Thu Minions (2015)
Bunyan and Babe (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး
Bunyan and Babe (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 5.1 Rotten Tomatoes 38 % Animation, Adventure, Comedy | 1h 24 min | Bunyan and Babe (2017) ဇာတ်ကားလေးသည် IMDb 5.1 Rotten Tomatoes 38 % ရထားသော Animation, Adventure, Comedy ဇာတ်ကားလေးမို့ ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ… ၁၂ နှစ်အရွယ် တာဗစ် ဘာကလေ နဲ့ သူရဲ့ ညီမလေး ဝှိုက်တနီတို့သည် ဒယ်လ်ဘသ် ကောင်တီက သူတို့ရဲ့အဘိုးအဘွားတွေရှိရာ လယ်ကွင်းတွေဆီကို နွေရာသီအလည်အပတ်သွားရောက်ခဲ့ကြသည်… လောဘကြီးသော မြေပိုင်ရှင် နောမ် ဘလန်ဖို့က မြို့သေးလေးမှ ရှိသမျှ လယ်မြေများကို ဝယ်ပြီး ဒေသခံများကို စားဝတ်နေရေးခက်ခဲအောင် လုပ်နေလေသည်… တာဗစ်က ဘလန်ဖိုရဲ့ လူတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပြီး ပေါလ် ဗန်ယန်နေထိုင်ရာ တောထဲကို ...
the croods (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 7.2 Rotten Tomatoes 77 % Animation, Adventure, Comedy | 1h 38 min | ဒီကားလေးက သိပ်ပြီး လူသားဆန်တဲ့ကားလေးလို့ ပြောရလေမလား. . . ဟိုး ကျောက်ခေတ် ဂူတွင်းနေ လူသား ဂူအောင်း လူသားတွေ ရဲ့ သဘာဝအကြောင်းကို အခြေခံပြီးဖန်တီးထားတဲ့ Animationကားလေးတစ်ကား. . . Animationဆိုပေမယ့် အထင်တော့မသေးနဲ့. . .ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ မေတ္တာအကြောင်းနဲ့ မိသားစုကို စောင့်ရှောက်ပုံအကြောင်း. . .တင်းကျပ်လှတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကြားက ဖောက်ထွက်ပြီး ဂူအောင်းမနေလိုတဲ့ သမီးငယ်တစ်ယောက်အကြောင်းကို The Croods မိသားစုလေး ပြသနာအနေနဲ့ ဒီကားမှာ မြင်တွေ့ရမယ်. . . အိမ်ကိုချစ်တဲ့ The Croods မိသားစုမှာ ခေါင်းဆောင် ဖခင်ကြီး Grug(ဂရတ်)တစ်ယောက် အိမ်နီးချင်း ...
All.Creatures.Big.and.Small.2015 မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 5.8 Rotten Tomatoes 41 % Animation, Adventure, Comedy | 1h 27 min | All.Creatures.Big.and.Small.2015 သည် IMDb 5.8 Rotten Tomatoes 41 % ရထားသော Animation, Adventure, Comedy ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားမို့ ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. --> ဇာတ်ကားမှာ ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးရေလွှမ်းမည့်ဘေးမှ တိရစ္ဆာန်များရှောင်ရှားကြပုံကိုရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်သည်။ အမြဲတမ်း လှည့်လည်သွားလာနေရသဖြင့် မိတ်ဆွေကောင်းမရနိုင်သည့်အဖြစ်ကို စိတ်ပျက်နေသော သားနှင့် မိမိ၏သားကို အန္တရာယ်ဆိုးမှကာကွယ်လိုသော ဖခင်အကြောင်းကိုအသားပေးဖော်ပြထားသည်။ မိဘနှင့်သားသမီးကြားမှ ခိုင်မြဲသောမေတ္တာနှင့် အန္တရာယ်ကြုံပါက ကြောက်ရွံ့မနေဘဲ မိမိခွန်အားရှိသလောက်ရုန်းကန်ကြရမည့်အကြောင်းကို ဤကားတွင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ ရေလွှမ်းသည့်အခါ မိဘနှင်ကွဲကွာနေရစ်သော သား သည် သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ အန္တရာယ်မှလွတ်မြောက်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းရှိမရှိကို ဆက်လက်ကြည့်ရှုသင့်သော Animationကားကောင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း... Review by May Pwint Translated by May Pwint Encoded by Win Kyaw ...